Ungayifihla kanjani i-IP ku-Mac: izinketho zokubhekabheka ngasese | Ngivela kwa-mac
Ungayifihla kanjani i-IP
URuben gallardo | | Izifundiswa
Njengasemhlabeni okungaxhunyiwe ku-intanethi Sinezincwadi ezisifakazelayo nezisikhomba emphakathini. Sikhuluma nge-DNI (National Identity Document). Yebo, singakudlulisela lokhu kwi-Intanethi. Indlela yokuzikhomba ku-Intanethi ngekheli le-IP (I-Inthanethi Protocol).
Leli kheli lihlukile ekuxhumekeni kwe-inthanethi. Kepha kufanele sehlukanise phakathi ikheli le-IP elizimele ne-IP yomphakathi. Esimweni sokuqala, yi-IP ehlukile enikezwe ikhompyutha ngayinye exhuma kwinethiwekhi yangasese yekhaya noma yehhovisi. Ngenkathi zonke ziholela ku-router, esebenza njengewindi ngaphandle futhi lokhu kuzoba yiyona esebenzisa futhi enekheli le-IP lomphakathi elinikezwe.
Kuyadingeka ukuba nalokhu kuhlonza ku-inthanethi, noma ngabe sibonga ngakho-noma ngenxa yako-, bangasilandelela; Bangakwazi ukuthi yini ukunyakaza kwethu okuku-inthanethi (izihloko ezithandwayo, amakhasi avakashelwe) noma bazi nokuthi sithumela ini ngamaqembu ethu. Ngakho-ke, muva nje kunezinkulumo eziningi ngobumfihlo, amalungelo ezinye izinkampani ezinquma ukwephula, njll. Noma kunjalo, kunezindlela ezahlukahlukene zokufihla i-IP. Futhi sizichaza ngezansi ngezibonelo ezithile.
1 Ungalazi kanjani ikheli lethu le-IP eliyimfihlo nekheli le-IP lomphakathi
2 Inketho elula yokufihla i-IP: Ummeleli weWebhu
3 Sebenzisa isiphequluli se-Opera ne-VPN yayo engenamkhawulo yamahhala
4 I-Virtual Private Network (VPN) yokufihla i-IP: ivikeleke kakhulu kepha inezindleko
Ungalazi kanjani ikheli lethu le-IP eliyimfihlo nekheli le-IP lomphakathi
Okokuqala, futhi njengoba sishilo, kwinethiwekhi yangasese (ekhaya noma ehhovisi) kukhona amakhompyutha ahlukile axhumeke ku-router. Bonke bazonikezwa ikheli eliyimfihlo le-IP (isibonelo: 192.168.1.25). Ukubona leli kheli le-IP ku-Mac yethu kufanele siye kulo mzila olandelayo:
Izintandokazi Zesistimu> Inethiwekhi
Futhi khetha uhlobo lokuxhuma esiphequlula ngalo i-Inthanethi.Okusesithombeni onamathiselwe ungabheka ukuthi sixhunywe yini ngoxhumano lwe-WiFi nekheli le-IP livela ngakwesokudla.
Uma esikufunayo ukwazi ikheli lethu le-IP lomphakathi - ukuhlonza kwethu yiNethiwekhi nokuthi wonke umuntu angakwazi -, ungayazi ngamakhasi e-inthanethi ahlukile anikezela lolu lwazi. Sizokunikeza izinketho ezintathu: Yini ip yami, IP yami y Bona i-IP Yami. (Sikushiyela izithombe-skrini ngezansi ngakunye)
Inketho elula yokufihla i-IP: Ummeleli weWebhu
Njengoba kungenzeka usuvele waqagela, leli kheli le-IP alikwazi ukususwa. Kepha njengoba kungenzeka ngobuso bakho, ungafaka imaski kuyo efihla ubunikazi bakho. Futhi yilokhu esikufunayo ngalo lonke lolu lwazi: ukufihla i-IP.
Isisetshenziswa sokuqala esizokuqamba ngaso sebenzisa Ummeleli WewebhuAmakhasi e-inthanethi azosebenza njengomxhumanisi phakathi koxhumano lwakho nesayithi olivakashelayo. Ngale ndlela sizofinyelela ukuphequlula okungaziwa kwamasayithi aku-inthanethi. Zisebenza kanjani? Kulula kakhulu. Into yokuqala ukukhomba eyodwa yazo. Itiye sincoma eyodwa ethakazelisa kakhulu futhi imahhala. Kuzo Fihla.Me. Kule proxy yamahhala kuzofanele simake izwe lapho ufuna abanye bacabange ukuthi uphequlula khona bese ukhetha izinketho ezahlukahlukene ezinikezayo: vumela amakhukhi, ama-URL abethelwe, ikhasi lokubethela, asuse imibhalo futhi asuse izinto. Lapho usuthathe isinqumo, yisikhathi sokubhala ikheli ofuna ukulivakashela bese ushaya ukhiye we- «enter».
Kulungile manje ingxenye engemihle yale ndlela ukuthi kungenzeka ukuthi ukuzulazula kungabi bushelelezi ngendlela othanda ngayo —Kumahhala ngakho-ke kugcwele kakhulu kunokujwayelekile—, ngaphandle kwalokho konke okwenzayo ngaphandle kwaleli khasi ngeke kube nokufihla. Ngakho-ke, ukufihla i-IP ngale ndlela ngeke kukusize uma uthumela ama-imeyili, usebenzisa izinsizakalo zemiyalezo esheshayo, njll.
Sebenzisa isiphequluli se-Opera ne-VPN yayo engenamkhawulo yamahhala
Ngaphambi kokufinyelela inketho yokugcina — futhi uvikeleke kakhulu—, futhi uma ungafuni ukuthola i-VPN ngezindleko zokufihla i-IP, isiphequluli esidumile se-Opera sinesevisi yamahhala ongaphequlula ngayo ngokungaziwa noma kuphi ku-Intanethi. Kepha, qaphela, uhlale ubheka lokho esike sakuphawula ngaphambilini: uma usebenza ngaphandle kwesiphequluli, yonke idatha yakho izovezwa. Uma wenza konke ngesiphequluli futhi unika amandla i-VPN yayo yamahhala, ungafihla i-IP.
Ukuze usebenzise le nketho ku-Opera, landa inguqulo yakamuva yesiphequluli kusuka ku- ikhasi elisemthethweni. Uma usufakiwe, iya ku- "Izinketho" kubha yemenyu bese Bheka isigaba esibonisa "Ubumfihlo nokuvikeleka". Kumenyu ezovela ngakwesokudla, uzothola inketho vumela i-VPN. Yimake futhi uzobona ukuthi kusukela lapho ku-bar yekheli kubonakala sengathi upheqa nge-VPN esebenzayo. Ngaphezu kwalokho, ngokuchofoza kuleso sithonjana esiluhlaza okwesibhakabhaka, sizoba nemininingwane mayelana nekheli le-IP elisetshenziswayo - uzoqinisekisa ukuthi akulona ikheli lakho le-IP elisesidlangalaleni (kungenzeka ukufihla i-IP) - nezwe okuvela kulo ngokomqondo kuxhunyiwe. Kuyindawo ebonakalayo. Ngakolunye uhlangothi, le nsizakalo, njengoba sikutshelile, imahhala futhi ayinamkhawulo. Lokho kusho ukuthi, Awunawo umkhawulo wedatha ngenyanga njengoba kuzokwenzeka esigabeni sokugcina.
I-Virtual Private Network (VPN) yokufihla i-IP: ivikeleke kakhulu kepha inezindleko
Mhlawumbe inketho ephephe kunazo zonke yokufihla i-IP yokuxhumeka kwethu kwe-inthanethi qasha insiza ye-VPN noma i-Virtual Private Network. Kungani? Yebo, ngoba ukuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuthi konke ukunyakaza kwethu, ukuthunyelwa kwedatha yethu, izingxoxo ngokususelwa ekuthumeleni imiyalezo, njll. Baphephile. Kusho ngendlela elula: beka isihlangu esiphelele ekuxhumaneni kwethu ne-IP yomphakathi.
Kunezinketho ezahlukahlukene kwi-intanethi, kepha sihlala seluleka ukusesha, ukubonisana, ukuqhathanisa kwi-inthanethi noma ukuzama ukwethemba izincomo zochwepheshe bewebhu. Thembeka, kungcono ukukhetha insizakalo ye-VPN yokufihla i-IP ehambelana nawo wonke amapulatifomu akhona emakethe. Okusho ukuthi, lapha sisuselwe kungxenyekazi ye-Apple, kepha kungenzeka ukuthi futhi ube nefoni ehlakaniphile engasebenza ngaphansi kwe-iOS noma i-Android, kanye nekhompyutha yesibili esekwe kwiWindows.
De nuevo Fihla.Me kuyindlela enokwethenjelwa noma i-VPN. Kepha futhi singakweluleka VPNBook, Qinisekisa o TunnelBear. Bonke banezinhlelo ngezinkokhelo zanyanga zonke noma zonyaka. Futhi, futhi uma ufuna ukuzama ezinye zazo, imvamisa zinamasu wamahhala. Noma kunjalo, yebo: imvamisa banemikhawulo yethrafikhi yanyanga zonke. Noma kunjalo, okungcono kakhulu ukuthi zonke zinezicelo zawo wonke amapulatifomu. Uma usulanda amapulatifomu onentshisekelo kuwo, kuzodingeka ukhethe izwe lapho unesifiso sokuzenza sengathi uyapheqa, yini ngempela oyifunayo ukuyifihla noma ukuyifihla, ngena ngemvume ngemininingwane yakho bese ugcine ukucushwa.
Uma wenze konke njengoba kufanele, lapho uzama futhi ikhasi elibonisa ikheli lakho le-IP lomphakathi, bekufanele lishintshelwe kwelinye elihluke kakhulu. Kungaphezulu, uma ufuna ukubona ukuthi ikheli le-IP elethulwa kusuka ekuxhumekeni kwakho kwe-inthanethi liyahambelana nezwe olilungiselele ku-VPN, vakashela leli khasi futhi izobuyisa imiphumela emibili: i-IP yakho yomphakathi nezwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayifihla kanjani i-IP
U-Alberto Guerrero kusho
Iqiniso liyathakazelisa kakhulu, i-VPN kimi ibonakala iyindlela engcono kakhulu noma ngabe ikhokhiwe.
I-FFmpeg 4.0 izuza ukuxhaswa kwamakhadi wehluzo
Uma ungomunye walabo abashintsha ukuhleleka kwamadeski ngokungahleliwe, yazi ukuthi ungakugwema